Ekwupụtara ka akwụ ụgwọ site na nkwụnye ego nke steeti maka ọkwa akwụghị ụgwọ n'ọdụ ụgbọ elu Istanbul | RayHaber | raillynews
HomeTurkeyMpaghara Marmara34 IstanbulKwesịrị ikwu na a ga-akwụ ya ụgwọ maka ọnọdụ emepebeghị emepe n'ọdụ ụgbọ elu Istanbul
07 / 01 / 2020 34 Istanbul, General, Ụgbọelu, Ụzọ Awara Awara, Isi akụkọ, Mpaghara Marmara, Turkey
na-ekwu na a ga-akwụ gị ụgwọ site n'ọchịchị steeti gaa na ọkwa ndị edochiri anya n'ọdụ ụgbọ elu istanbul
Naanị otu n'ime ụzọ anọ nke ọdụ ụgbọ elu Istanbul, nke a na-arụ ọrụ, ka a ga-akwụ ụgwọ n'ihi nkwa ndị njem na-emeghị emepe na mbido.
SözcüDabere na Basak Kaya, CHP Kocaeli osote Haydar Akar, ụlọ ọrụ ahụ anaghị emeghe ọkwa ndị ọzọ nke ego mkpuchi ndị njem, ka o kwuru. Akar kwuru na e ji usoro ịbufe ụgbọ elu nke ụgbọ ala Istanbul wee cheta na ụgbọ elu ahụ ejiri ijeri 25 ijeri 22 Euro gbakwunyere VAT maka afọ 152 na-arụ ọrụ. Akar kwuru, sị:
Gọọmentị Devlet nyere nkwa maka pasent iri isii na isii maka ọdụ ụgbọ elu ọhụrụ. E nyekwara ha onyinye dị okirikiri, VAT, ịhapụ ibubata ego. Gwọ ụgbọ elu nke ekwere nkwa na ọdụ ụgbọ elu BOT niile dị Euro 61 na ahịrị mba ụwa na Euro 15 ebe a. 20-3 Euro na ọdụ ụgbọ elu ụlọ na 2 Euro ebe a. Airportgbọ elu ahụ nwere nkebi anọ. A ga-eme ọkwa nke 5 na 4 dabere n'ọnọdụ nke 3 na nke 4. Yabụ o doghị anya ma ọ bụrụ na emechara. Ọ bụrụ na mkpọtụ emee, ụlọ ọrụ ahụ ga-ewulite nkebi nke 1 na nke 2, ọ bụrụ na ọ bụghị, ọ gaghị aga. ”
Onye ọrụ ga-enweta ego ya
Haydar Akar kwusiri ike na ego a ga-akwụ ụgwọ ga-abụ nke ọma ebe a ga-ewu ya nke atọ na nke anọ. ”A na-eme ihe ndekọ onye njem njem maka ọkwa ndị a. Akpa mbu nwere ikike nke ndi njem 3 nde. Mgbe agba nke abụọ gasịrị, ikike njem ga-adị nde 4. Ọ bụrụ na nde 70 akwụrụ, a ga-ewu ọkwa nke atọ yana ikike nke nde 2 ga-abịa. Ọ bụrụ na ọkwa nke atọ ga-arapara, A ga-ewu Stage 90. Agbanyeghị na emeghị ha, ụlọ ọrụ na-arụ ọrụ ga-enweta ego ha. N'ihi nkwekọrịta banyere ọnụ ọgụgụ ụgbọ ala gị na-ekwe nkwa na mgbanwe ị na-enye, gọọmentị enweghị ike iwelite ego maka ndị na-eme ya. Na-ewu ọwara otu ahụ. Anyị na-ahụ otu ihe osise na ala na ikuku. ”
Onye na-esote onye isi ndị njem nke ụgbọ elu, netwọk ụgbọ njem, n'oge, afọ iri gara aga yapılan
Site okporo ígwè n'agbata Germany na Turkey tr Box Transport Amalite
Ntụle Obi Ụtọ: A ga-azụta Susta Safes (TUDEMSAS)
3 Na-agbaso Ihe Maka Mbata na Ọpụpụ. Anya ụgbọ elu site na ikuku
3. Mkpesa nke Ọnwụ Ndị Ọrụ Kpụrụ na Nzukọ omeiwu
Nkwupụta site na DHMİ na ebubo na ụgbọ elu apụghị ịdata na Ọdụ ụgbọ mmiri Istanbul
Sapanca Fast Train Expropriation Ụgwọ a ga-akwụ ụgwọ
3. A ga-akwụ ụgwọ ndị ọrụ ụgbọ mmiri n'ihu Ramadan
Onu ogugu Eurosia ga adi $ 4 gbakwunyere VAT… Nke a bu ndi Turkey na OGS na HGS…
Ịkwụ Ụgwọ nke Ihe Ndị Na-ahụ Maka Ihe Ọdachi Na-ahụ Maka Ndị Ọrụ
Ọgbọ ụgbọelu BOT